I-Semalt ichaza ukuthi ungayithola kanjani indawo yakho emva kokuhlaselwa okunonya
Okuhlangenwe nakho okudabukisayo kunazo zonke kumnikazi wesayithi ukuhlasela okunonya kwe-webs.Kulesi simo, abathuthukisi bakhuthazwa ukuba bahlale bezolile futhi benze kahle izinyathelo ezifanele. UFrank Abagnale, the i-Semalt Imenenja yePhasimende eMpumelelo enkulu, inikeza izinyathelo zokuvuselela isayithi elivinjelwe ngokuhlelekile. Asambe!
Okubaluleke kakhulu, hlola ikhompyutha yakho kunoma yiziphi amagciwane. Lena isinyathelo sokulungiselela esizaukufaka eceleni ukuthi kungenzeka ukuthi ikhompiyutha yakho ibe ngumthombo wokuhlaselwa ngaphambi kokuqala ukubuyisela isayithi. Kule ncwajana, ngaleyo ndlela, ukuskenaikhompyutha yakho yangakini yezifo, i-malware noma amagciwane kufanele ibe isinyathelo sokuqala. Isibonelo sokusakazwa kwegciwane lesincomo yi-EU-Cleanerkusuka e-Anti-Botnet yokubonisana isikhungo, eJalimane. Isinyathelo sisiza umthuthukisi wesayithi ukususa noma iyiphi i-malware mahhala. Ukwengeza, lokhuisikhungo sokubonisana ngaso leso sikhathi sithumela inombolo yetikiti kanye nedatha yokuthintana nge-imeyili kumnikazi wewebhusayithi uma kwenzeka isayithi elithintekile.
Okwesibili, noma yikuphi amaphasiwedi wokuphatha kufanele ashintshwe. Kuyinto isinyathelo esiqinisekisa abaduniasikwazi ukufinyelela ku-database yakho, iwebhusayithi noma isikhala sewebhu. Amaphasiwedi angaphathwa kusuka kunsizakalo ye-web hosting service amakhasimende kanye nesigaba adminwesayithi. Ukwengeza, ukuvikelwa kwephasiwedi kungathuthukiswa ngokufinyelela isikhala sewebhu ngezinhlelo zokuphepha ezifana ne-Secure File TransferI-Protocol (SFTP), ukushintsha amaphasiwedi kwamanye amasevisi nokukhetha amaphasiwedi aphephile kakhulu. Amagama okuzenzakalelayo akufanele asetshenziswe njengeamaphasiwedi we-admin wokuphepha kwewebhu.
Okwesithathu, sebenzisa phpMyAdmin ukusetha kabusha iphasiwedi ye-admin admin..Uma umnikazi wesayithi engakwaziukungena ngemvume kusigaba somlawuli sesayithi labo, abaduni bangase bashintshe iphasiwedi noma bavimbe i-akhawunti. Kulesi simo, iAmaphasiwedi kulwazi kumele ashintshwe. Lokhu kungafezwa ngokusebenzisa phpMyAdmin kubathuthukisi usebenzisa i-WordPress.
Ukulimala kufanele kuhlolwe esiteji esilandelayo sokubuyisela indawo ehlanjelwe. Ihlanganisaukuhlola isimo nokuhlela ukuthi ungaqhubeka kanjani. Ukunquma amafayela anegciwane, noma yikuphi ukukhazamiseka kwedatha ebucayi, nokufinyelelai-database futhi uma ezinye izingosi kwi-web server yakho zithintekile. Inqubo ingenziwa ngokusetshenziswa kwe-Google Webmaster Tools.
Okulandelayo, buyisela isipele futhi uhlole i-malware. Kulesi sinyathelo, umnikazi wesayithi kufaneleshintsha noma yimaphi amafayela athintekile nge-backup okungenakulinganiswa kwamafayela. Ukwengeza, i-database kufanele ibuyiselwe kusuka kusipele uma kungenzekaukuthi abaduni abafinyelele ku database ngeke bakwazi ukukhishwa. Khumbula nje, izipele ezimbili ezibalulekile yi-Joomla ne-WordPress.
Buyekeza ama-themes, ama-plugin, izandiso nezinhlelo zokusebenza. Abaqaphi bavame ukusebenzisa ukuphephaizimbobo ezandisweni, i-plugin, nezingqikithi. Ngakho-ke, ngokushesha nje uma ama-backups abuyiselwe, zonke izimbobo zokuphepha kufanele zivaliwe ngokuvuselelwazonke izihloko, izandiso, nezinhlelo zokusebenza. I-plugin ngayinye ithinta ukuphepha kwesayithi.
Okokugcina, sebenzisa ukususa isayithi kubalandeli bamnyama. I-Yahoo, i-Google, ne-Bing igcinaabamnyama bezindawo ezithatheleleke amagciwane. Noma yiliphi isayithi elibekwe ohlwini lwe-Google, ngokwesibonelo, lijeziswa ngesimo esingaphansi noma sisusiwekusuka ohlwini lokusesha. Ngakho-ke, ngemuva kokungenisa izipele ezihlanzekile nokuguqula amaphasiwedi, yazisa izinjini zokusesha ukuze zisuswe kumabhalane amnyama.
Ekuphetheni, ukuhlaselwa kumasayithi kuyingxenye yezwe lamanje lanamuhla. Uma isayithiiphikisiwe, abathuthukisi bangase bazizwe besabekile. Ngalesi sikhathi, kubalulekile ukuhlala uzolile ngoba manje uyazi okufanele ukwenze futhi uphinde ululameiwebhusayithi.